Satọdee 16 Jenụwarị 2021
Ime Ụlọ Nke a bụ eriri akwa maka akwa ime ụlọ. Ahụ dị mkpụmkpụ nke dị obere karịa mpempe akwụkwọ Japanese dị ka telivishọn okpu, na-enweghị nke ọma na-enweghị ihe mkpuchi n’elu. Oghere ogologo 4 m nwere oghere 29, oghere ọ bụla nwere ike idobe ma jigide uwe mkpuchi na-enweghị akwa mkpuchi, ọ na-arụ ọrụ maka akọrọ ngwa ngwa. A na-eji akwa polyurethane na-egbochi ihe mgbochi na ihe mgbochi, ihe nchekwa, nke dị ọcha. Ibu Max bụ kilogram 15. 2 pcs nke nko na ahụ na - emegharị ahụ na - ahapụ iji ọtụtụ ụzọ. Obere ma dị nfe, mana nke a bara nnukwu uru n’ime ụlọ ịsa ahụ. Ọrụ dị mfe na ịwụnye smart ga-adabara ụdị ime ụlọ ọ bụla.
Fraịdee 15 Jenụwarị 2021
Tọọzdee 14 Jenụwarị 2021
Oche Emere ihe eji eme ka ogwe aka nke infinity mee ihe bu nke oma n’azu azu. Ọ bụ ntụaka nke akara infinity - ọnụọgụ dị asatọ. Ọ dị ka a ga - agbanwe ọdịdị ya mgbe ọ na - atụgharị, na - edozigharị usoro nke edoghi ma na - akpọghachite akara ebighi ebi na ọtụtụ ụgbọ elu. A na-ejikọ azụ azụ site na ọtụtụ eriri olu na-etolite akaghị mpụga, nke na-alaghachi na akara nke cyclic ndụ na-enweghị njedebe na nguzozi. A na-ekwusikwu ihe ike n'ụkwụ pụrụ iche nke na-edozi ma na-akwado akụkụ nke oche oche ahụ dị ka ihe mgbochi na-eme.
Wenezdee 13 Jenụwarị 2021
Ọkụ Shapedị nke oriọna Capsule na-akpọghachi ụdị nke capsules ndị juru ebe niile n’ụwa taa: ọgwụ, ihe owuwu ụlọ, oghere, thermoses, ọkpọkọ, okpu oge nke na-ebugharị ụmụ ga-adị ọtụtụ afọ iri. Ọ nwere ike ịbụ nke ụdị abụọ: ọkọlọtọ na ogologo. Oriọna dị n'ọtụtụ agba nwere nghọta dị iche iche. Ijikọ eriri naịlọn na-agbakwunye mmetụta ejiri aka rụọ oriọna ahụ. Universaldị ya bụ nke zuru ụwa ọnụ bụ ikpebi ịdị mfe nke mmepụta na oke mmepụta. Sachekwa na usoro nke oriọna bụ uru ya kachasị.
Tiuzdee 12 Jenụwarị 2021
Paụndụ Ndi Sinan Mansions nyere ikike ka a na-akpọ ResoNet Pavilion na Shanghai maka mmemme nke Afọ Ọhụrụ nke China 2017. Ọ mebere paụndụ nwa oge gbakwunyere ọkụ ọkụ "resonet" nke dị n'ime ime. Ọ na - eji usoro Low-Fi mee ihe iji wee were anya nke uche wee mee ka ebe ihe ndị mmadụ dị juputara na gburugburu ebe obibi, site na mmekọrịta nke ọha na eze na ihe ndị gbara ya gburugburu site na eriri ọkụ. Nnukwu ụlọ ahụ na-eme ka ọchịchị ụwa pụta ìhè na nzaghachi nke mkpali. Ewezuga ndị ọbịa nwere ike ịbịa mee nri mmemme nke opupu ihe ubi, enwere ike iji ya dịka ọkwa mmemme.
Mọnde 11 Jenụwarị 2021
Oche Ngwongwo ogwe aka nke Lollipop bu ngwakọta nke uzo di iche na nke ejiji. Ihe eji eme ya na ihe ndi ozo acha acha edoghi anya di ka swiiti, mana n'otu oge ogwe aka ahu kwesiri dabara na uzo ozo. A na-eme ụdị chupa-chups ntọala nke ogwe aka, a na-eme azụ na ọdụ n'ụdị kandụl kpochapụwo. E mepụtara oche agha Lollipop maka ndị na-enwe mmasị mkpebi siri ike na ejiji, mana achọghị ịhapụ ọrụ na nkasi obi.
Or2 Ọdịdị Fotochromic Kanopi Satọdee 27 Febrụwarị
Eye of Ra' Arịa Ụlọ Ọha Na Eze Fraịdee 26 Febrụwarị
NISSAN Calendar 2013 Kalenda Tọọzdee 25 Febrụwarị
Disemba 2020 (93)
Ajụjụ ọnụ nke ụbọchị Satọdee 27 Febrụwarị
Chepụta akụkọ mgbe ochie Fraịdee 26 Febrụwarị
Nhazi nke ubochi Tọọzdee 25 Febrụwarị
Onye rụrụ ụbọchị Wenezdee 24 Febrụwarị
Otu mmebe nke ụbọchị Tiuzdee 23 Febrụwarị
Ime Ụlọ Sofa Oche Ọkụ Paụndụ Oche